iOS 11 uye macOS Sierra inofamba ichienda kuzvinhu zviviri-chokwadi | IPhone nhau
Muna 2015, Apple yakaunza mbiri-chinhu chechokwadi sekusimudzira kune maviri-nhanho nzira yekusimbisa, nzira nyowani iyo Apple yanga ichida kushandisa. zvakanyanya kugadzirisa chengetedzo kana uchiwana zvishandiso zvakanyoreswa neApple ID. Kumanikidza vashandisi kujairana nenzira nyowani inoshandiswa kuchengetedza kupinda kune data rakachengetwa muApple ID, vakomana vanobva kuCupertino vatanga kutumira email kune vashandisi vane maviri-nhanho ongororo system, vachizivisa kuti mushure mekuiswa kweIOS 11 kana MacOS Yakakwira Sierra iyo nzira yekuzivisa ichave iri mbiri chinhu.
Iyo yakapetwa chinhu chinongedzo nzira inoda angangoita iOS 9, OS X El Capitan, watchOS 2, kana chero vhezheni yeTVOS. Dzese nzira dzekuzivisa dzakafanana chaizvo, asi zvakapetwa kaviri, zvinongoerekana zvatumira kodhi ine manhamba matanhatu kumidziyo yese yakanyoreswa neiyo imwechete Apple ID, nepo maviri-nhanho sisitimu yekusimbisa ichikumbira mushandisi kutumira kodhi manhamba mana kune chero mudziyo unovimbwa nawo nhamba inosangana nefoni.
Uye zvakare, iyo mbiri-chinhu chechokwadi chinotiratidza pachiratidziro chemidziyo yese inosangana neiyo imwechete Apple ID mepu ine nzvimbo yechigadzirwa chitsva chiri kuyedza kuwana account yedu, kana nzvimbo kubva kwaunoda kuwana iCloud.com kana tisina kumbozviita nekombuta imwe chete. Iwindo iri rinotibvumidza isu kubvumidza kana kuvharira iyo mukana. Nekuzvibvumira, zvishandiso zvedu zvinowana kodhi ine manhamba matanhatu ayo atichafanirwa kuisa pane iyo iPhone, iPad, iPod touch kana komputa kubva kwatiri kuyedza kuwana yedu Apple ID.
MuSpain, kwemwedzi yakati wandei, nzvimbo inoratidzwa nebasa iri inogara yakanongedzera kuMadrid, kunyangwe isu tiri mune chero magumo epeninsula. Ngatione kana Apple yawana chinhanho uye ichigadzirisa iri dambudziko diki kana ichinyatsoda kuti vashandisi vashandise ino nyowani yekuchengetedza basa iyo ichatanga kuve inosungirwa mune inotevera vhezheni yeIOS uye macOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 uye macOS Sierra inofamba ichienda kuzvinhu zviviri-chokwadi
Chinhu chekunongedzera kuMadrid (uye dzimwe nguva Barcelona) zvinosuwisa kana iwe ukashandisa chishandiso chinokuwana iwe. Shamwari yakachinja mapassword ake mune zvese nekuti zvakauya kwaari kuti mumwe munhu akawana kubva kuMadrid uye aive iye mubhurawuza idzva ... kubva kuCanary Islands